Daaha, Shirkadaha Alaabada Jumlada ah iyo Soosaarayaasha -Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Daabacadeena daabacan waxay ku habboon tahay daaqadaha badankoodna way fududahay in la rakibo ilbiriqsiyo. Semi-sheer-kan ayaa ku habboon nooc kasta oo qurxin ah oo dhalaalaya qolalka leh Muuqaal raaxo iyo muuqaal leh.
QURXINTA WANAAGSAN --- Qaabka joomatari ee weyn waa mid qurux badan wuxuuna jawi fudud siinayaa qolka. Sheer ku filan socodka hawada wanaagsan, iftiin weyn, laakiin wali waxay bixisaa asturnaan.
Amazon Rain Forest caag daabacan shey
QURXINTA GURIGA QURUXDA BADAN - Qaab caleemo gaar ah oo ku saabsan daahyada cad, waxay ka dhigeysaa daahyada shabagyadu kuwa ka duwan sheedaha adag, ku dar xarrago iyo dareen dabiici ah qurxinta gurigaaga, oo ku habboon sida qolka jiifka / qolka fadhiga / daaweynta daaqada qolka cuntada.
Qaab Casri ah oo Loogu Talo Galay Linen Guava U fiirso polyester 8577 daabac sheer
TAYADA PREMIUM & DESIGN PREMIUM - Qalabkan daabacan waxaa ku jira sawirro joomatari qurux badan leh oo u keenaya milkiileyaasha guryaha aragti cusub.
QAABKA SHAQAALAHA SHAQAALAHA & NUQUL QAADASHADA PREMIUM SHEER - Qormadeenna daabacaddu waxay ku habboon tahay daaqadaha badankood waana sahlan tahay in lagu rakibo ilbiriqsiyo.
KHATARTA JOOJINTA TAARIIKHDA JOOGTADA & TAYADA PREMIUM ---- oo ka kooban guud ahaan daabacaadda qaabka ubaxyada cad, dharka linenka ah ee dharka la dul mariyay ayaa si siman u faafinaya qol kasta ..
Daahidda Cinabka Canabka Daaha Dahaaran ee loogu talagalay qolka fadhiga polyester 8402 daabac sheer
QALABKA QAADASHADA & QAYBTA DARYEELKA --- naqshadeynta rinji buluug khafiif ah, jawi cusub oo dabiici ah, jawi xarrago leh, ku dar qurxinta qolkaaga, waxay xannibi kartaa xoogaa qorrax ah, oo quseeya qolal badan.
Soo Jiidashada iyo Soo jiidashada JOOJINTA ---- Caleemaha caleemaha waxay ku darayaan qurux dabiici ah qolka, maskaxda dadka ku keen dabeecada dhabta ah.
SERVE WELL & NICE FABRIC ---- daah daahirka ah wuxuu leeyahay qaabab daahyo casri ah iyo noocyo casri ah oo leh midabyo aad u fiican.